Kedu ihe bụ ROTI? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na R	» ROTI
ROTI bụ okwu mkpọ okwu maka Nlaghachi na ntinye ego teknụzụ.
Yiri ịlaghachi na ntinye ego (ROI), nke a bụ oge ole ọ na-ewe maka itinye ego na teknụzụ ma ọ bụ ikike ngwanrọ iji weghachi ego ole ọ na-eri iji mejuputa. Ọmụmaatụ: Itinye ego na ikpo okwu a nwere ROTI nke ọnwa 7 maka ndị ahịa nkezi. Enwere ike tụọ ya na mmụba pasentị na ego enwetara karịa